खिजीदेम्बाले ३ दिनमा ८ सय नागरिकको उद्धार
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका अन्य स्थानीय तहको अनुपातमा अग्रस्थानमा देखिएका छन् । राजधानी लगायत राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका गाउँपालिकाभित्रका नागरिकलाई उद्धार गर्ने कार्यमा गाउँपालिका अग्र स्थानमा देखिएको हो ।
खिजीदेम्बाले काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा रहेका ७ सय ५० भन्दा बढी नागरिकलाई उद्धार गरी घरघरमा पुर्याएको अध्यक्ष वेदबहादुर रोकाले जानकारी दिए । पालिकाले नागरिकले भाडा तिर्न नपर्ने गरी (निःशुल्क) सवारी साधनको व्यवस्था गरी आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित गन्तव्य पुरयाइएको हो । वैशाख ८ गतेबाट उद्धार शुरु गरेको अध्यक्ष रोकाले बताए ।
उद्धारका लागि राजधानीमा सम्पर्क कार्यालय नै स्थापना गरेर गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरेको स्थानीय तेण्डी शेर्पाले बताए । ‘तीन दिनसम्म गाउँ फर्कनेको निक्कै चाप खेप्नु पर्यो । कसरी सबैलाई सुरक्षित तरिकाले उद्धार गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा हामी क्रियाशिल भयौं ।’ थोलेदेम्बा शेर्पा किदुगका संस्थापक महासचिव समेत रहेका शेर्पाले भने ‘सबैको समयमै उद्धार गर्न पाउँदा खुसी अनुभूत भयो ।’
गाउँपालिकाले राजधानीमा आएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर, पर्यटन पेशमा आबद्धहरु, विद्यार्थी, आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गका परिवारलाई उद्धार गर्ने नीति लिइएको थियो । ‘सम्मानित सर्बोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई दिएको आदेशको जगमा टेकेर हामीले नागरिकहरुका उद्धार गरेका छौं । उद्धार गरी गाउँ पुगेका नागरिकहरुले आफ्नै घरमा बस्नुपर्ने शर्त तोकेका छौं ।’अध्यक्ष रोकाले भने ‘गाउँपालिका प्रवेश गर्ने स्थानमा हामीले स्वास्थ्य जाँच गर्ने र सहायत कक्ष समेत स्थापना गरेकाले को–को गाउँ आए ? उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ? कोरोना संक्रमण छ की छैन भन्ने तथ्याङ राखेका छौं ।’
चीनबाट फैलिएको कोरोनाबाट विश्व आक्रन्त बनेको र महामारीका कारण नेपाल समेत लगभग १ महिनादेखि वन्दाबन्दीको अवस्थामा हुँदा नागरिकहरु अलपत्र परेका थिए । कतिपयले हातमुख जोड्न समेत समस्या भएपछि हिँडेरै आफ्नो घर जान थालेपछि गाउँपालिकाको अग्रसर भएर नागरिकहरुको उद्धारमा जुटेका थिए ।
लाङटाङ र लमजुङबाट पनि ल्याइयो
गाउँपालिकाले रसुवाको गोशाइकुण्ड गाउँपालिका, लाङटाङ क्षेत्रमा अलपत्र ३० बढी मजदुरको उद्धार गरेको छ । कतिपय मजदुरहरु यसअघि नै हिडेर काठमाडौं आएका थिए । बाँकी मजदुरलाई त्यहाँको स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उद्धार गरेको अध्यक्ष रोकाले शेर्पाखबरलाई बताए । त्यस्तै, लमजुङको मस्र्याङदी गाउँपालिकामा अलपत्र परेका मजदुरलाई समेत गाउँ फर्काउन सफल भएको उनले बताए ।